Madaxweyne Xasan: Halaga qeybqaato maamul u sameynta Shabeellaha Dhexe & Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay shgaaciyey in maamul loo dhisi doono gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Madaxweynaha oo ayaa ugu baaqay dadka ku nool labadaas gobol iney diyaar garoobaan sidii looga qayb-qaadan lahaa maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
“Waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dhismaha maamul loo dhan yahay iyo inaan diyaar u noqono hirgelinta maamulka federaalka, waxaa soo socda dhismihii maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo shalay dad Baledweyne la hadlay.
Sidoo kale, wuxuu madaxweynuhu intaas ku daray in dhismaha maamullada gobollada ay ka qayb ka qaadanayso horumarinta adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan rabaa inaad la-tashiyo la yeelataan dadka ay taladu idin kala dhexeyso si loo helo maamul ka qayb-qaata nidaamka federaalka ah, talo ayaad ku leedihiin dhismaha maamul goboleedyada, dhismaha maamul u sameynta gobollada dhimanna meel fiican ayay marayaan ee u istaaga sidii aad u badin laheedeen tallooyinka ku aaddan dhismaha maamul ay labada gobol yeeshaan,” ayuu madaxweyne Xasan.
Dowladda Soomaliya ayaa qorsheyneysa in Shaballaha Dhexe iyo Hiiraan loo dhimo maamul goboleed, hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in arrintaas muran ka dhasho, maadaama reer Hiiraan rumeysan yihiin iney yihiin labo gobol.